Finland oo bixinaysa kaarar cusub oo deganaansho | Somaliska
Finland ayaa bixinaysa kaarar cusub oo deganaansho ka bilaabata sanadka soo socda kuwaasoo ay ku jiraan faraha qofka. Nidaamka hada laga isticmaalo Finland ee ah warqada baasaboorka lagu dhajiyo ayaa guud ahaan la joojin doonaa.
Arintaan ayaa macnaheeda yahay dhamaan dadka deganaanshaha dalbada iyo kuwa iska dhiiba wadanka in laga qaadi doono faraha kuwaasoo lagu keydin doono kombutarada Yurub. Finland ayaa qorsheynaysay in ay arintaas sameyso mar hore balse cilado farsamo ayaa dib u dhigay.
Dadka deganaanshaha ka soo dalbanaya dibada ayaa waxay haystaan ilaa bisha May 20, 2012 inta uusan dhaqan galin kaarka cusub.
Kaarka cusub ee ay bixinayso Finland ayaa waxa uu la mid yahay midkii Sweden ay bilowday bishii May ee sanadkaan. Midowga Yurub (EU) ayaa soo saaray sanadkii 2008 amar ku wajahan in dhamaan wadamada Yurub ay bixiyaan kaarka nuucaan ah.
wan hasyana sweden way na siisay kan lkn wax jira maha akhiyareeeeeeey
maxuu kuxunyahay mise waa sheekadiinii
qof swedan faro kuleh ma aadi karaa mise way soo celinayaan asxaabey?????
December 21, 2011 at 08:07
Maxaa udhexeeya faraha caadiga ah iyo kuwan cusub ee ay bilaabeen waa suaale,
Waxaan filayaa inay yihiin sharciyo khuseeya wadanada ama dawladaha jimcaaloow sxb qoraal qoraalkan dhaama ku soo rid meesha, waa sidee ma bilaa maqaal baad noqotay wa yaabe.
Bulshada wax dan ah oo ay wax kaafiidi karaan baa loo baahanyahay intan cid walbaa oge,
talo malaha saaxiibtinmo ok.
xasan bariise says:
aad ayaan ugu faraxsahy in nala siiyo kaaraan kaan maadma aanhy dadka ku nool dalka finlnd kaas oo wxa yaabo badan naga sacaidi doono oo awal basaboorka ku xirna ataas oo ka sareysa in mar walba aad sidato basaboor oo aad ka maarmi doonto
akram hashi farax says:
dhaman bahad barnamij ka wan salamay salan kadib waxan ku farax sanahay ka mid naqoshaha gurub ka mahad sanidin